Tsy Mila Ny Uber (tolotra-taxi) Intsony i Seoul, Saingy Mbola Aza Apetraka Ny Findainao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Aogositra 2014 8:06 GMT
Vakio amin'ny teny Español, македонски, Français, 繁體中文, 简体中文, English
Sarin'ny taxi ao Seoul, avy amin'i Mark Zastrow (CC BY NC 2.0)
Noraràn'ny governemantan'ny tanànan'i Séoul, renivohitry Koreana-Tatsimo ny Uber, tambajotram-pitaterana malaza izay mampiasa fampiharana finday hifaneraseran'ny mpandeha amin'ny saoferan'ireo fiara ahofa sy ny tolotra “ridesharing” (fiarahana mandeha amin'ny fiara iray). Nilaza ireo manampahefan'i Séoul fa mametraka ny maodelin'ny fandraharahana Uber ho tsy ara-dalàna ireo fitsipika ao an-toerana mikasika ny fisoratana anarana sy ny fiasan'ireo taxi. Hoan'ny Uber kosa, tsy nangina manoloana ireo olany ao Seoul izy. Nampitandrina ny orinasa (Uber) vao haingana fa “mety hidiran-doza ny tanàna raha mbola hijanona amin'ny lasa sy taraiky amin'ny hetsika “mifampizara harena” manerantany.
Niteraka fanehoan-kevitra isan-karazany tao amin'ny media sy teo amin'ireo mpanjifan'ny tolotra-taxi ao an-tanàna ny tsy fisian'ny Uber intsony ao Seoul.
Maningana amin'ny resabe momba ny Uber ao Seoul ny Bloter.net, habaka mampivondrona mpanoratra gazety sy bilaogera mba hitatitra momba ny teknolojia vaovao. Nitsapa-hevitra[ko] mikasika ny disadisa momba ny Uber ny Bloter.net, ary nahita fa mahatonga azy hanahirana ny mijery ny raharaha eo amin'ny lafiny fijery ara-teknika sy araka ny lalàna fotsiny. Nanazava ny Bloter.net fa ny fandraharahana ara-taxi dia tsy miantraika amin'ireo saofera sy orinasan'ny taxi efa mijoroy ihany, fa miantraika amin'ireo vondrona mpiray tombontsoa, anisan'izany ny fitantanana ny tanàna, ireo sendikà, ary mazava ho azy ireo mpajifa. Tsy niresaka tsy fandoavan-ketra ny Bloter.net fa nanontany raha mahavita “mifampizara harena” tokoa ny Uber.
Manasongadina [ko] ny fomba nanimban'ny Uber ny indostrian'ny taxi ao amin'ny faritra sy ny fandrisihana amin'ny tsy fandoavan-ketra ireo fampahalalam-baovao kaonservativa – olana roa izay nampisy disadisa teo amin'ny Uber sy ny manampahefan'ny tanàna any amin'ny firenen-kafa. Ny fikambanan'ny teknolojia ao Seoul kosa tetsy andaniny naneho ny tahony fa mety hisy fiantrakany ratsy amin'ny famoronana zava-baovao hoavy sy tetikasa fananganana orinasa ao Korea Atsimo ny fandraràna ny Uber.
Tsy hita na aiza na aiza ny zava-baovao entin'ny Uber, eto Korea Atsimo farafaharatsiny. Na dia eo aza ny olana araka ny lalàna, mbola nampiasa ireo saofera sy fiara ahofa amin'ny asany mahazatra ny Uber, ary mbola mitady saofera any amin'ny sampan-draharaha fitadiavana mpiasa mihitsy aza ny Uber amin'izao fotoana izao […] Raha ny marina, dia mitovy tanteraka amin'ny tolotra taxi tsy ara-dalàna (papango) ny orinasa ankehitriny. […] Nanimba ny fidiram-bolan'ny taxi, izay mbola mifandrirotra ao anatin'ny olany sy ny fiadiana tombontsoa ao anatiny ihany koa, ny Uber. Ratsy laza noho ny fahasiahan'izy ireo amin'ny mpanjifany ny mpisaofera Taxi [ao Korea], saingy anisan'ny ‘fara-vonjin” ny olona ihany koa izy ireo. […] Ny fahazoana karama miorina amin'ny fahadalana tahaka izany, dia toy ny boatin'afokasika andrasana hirefotra.
Nanoratra tao amin'ny youngrok.com, namaly [ko] ny lahatsoratry Bloter.net ny bilaogera teknolojia iray, izay nilaza fa masiaka loatra ny fiampangana ny Uber.
Raha miroborobo ary mifandòna amin'ny lalàna ny orinasa iray, fepetra roa ihany no azon'ilay orinasa isafidianana. Voalohany, afaka miala amin'ireo fitsipika izy ireo, na manolotra lalàna fanampiny mba handraràna tsotra izao izay orinasa vaovao mety ho tonga. Ny safidy faharoa dia ny fanitsiana ny lalàna, mba handoavan'ny orinasa hetra. […] Ny tokony hanontaniantsika dia: «Mampidi-doza ny fiarahamontsika ve ny Uber?” […] Niantso ny Uber ireo mpanjifa Koreana satria latsaka an-davaka ny tolotra taxi misy ao amin'ny firenena. Halan'ireo mpanjifa izany. Halan'ireo saofera mitondra ny fiarany manokana izany (tolotra taxi). Na dia ireo mpisaofera bus aza mba mankahala izany ihany koa. Ary ny Uber ihany no mahasahana tsara ity sehatra ity. Noho izany, manoloana ny sata ankehitriny mikasika ny rafitra taxi, maninona no tsy omentsika alalana ny Uber?
Mizarazara ihany koa ny hevitr'ireo saofera taxi ao Korea mikasika ny Uber. Nilaza ny sasany fa ny raharaha taxi ao Seoul, izay mahasahana faritra midadasika araka ny tokony izy [ko], dia tsara amin'izao ahitana azy izao. Ny sasany kosa nilaza ny Uber ho manome tolotra tsara kokoa [ko] noho ireo vondrona taxi ao amin'ny faritra. Na inona na inona hevitry ny olona momba ny indostrian'ny fitaterana, misalasala momba ny tetikasa vaovaon'i Seoul hametraka fampiharana taxi mitombo isa ao an-tanàna izay mitovy be amin'ny Uber ny ankamaroan'ny mpiserasera Koreana. Mikasika ireo ahiahy rehetra amin'ny raharaha taxi rahampitso ao Korea, maro tamin'ny raharaham-panafintohinana Uber no nampiroborobo ny resaka rafitra taxi misy ao an-toerana.
Mety tsy ho afa-po izy ireo, fa mila mankatò ny lalàna misy ankehitriny ao Korea ny Uber. Na izany aza, mino aho fa hitondra fanovana hoan'ny tontolon'ny taxi – tsy hoan'ny fampiharana finday hoan'ny taxi ihany fa hoan'ny tontolo rehetra ao amin'ny firenena ity adihevitra ity. Maro be ireo fahasamihafana eo amin'ny taxi izay misy mety lafo kokoa, na saofera mahafinaritra manokatra ny varavarana hidiranao (tahaka ny an'ny Uber), ary misy koa ireo fiara mamofona sigara miaraka amin'ny saofera be resaka loatra.
Ny fanapaha-kevitr'i Seoul handràra ny Uber sy hamorona fampiharana finday solony dia mampihomehy tsotra izao. Raha misy ny tsy maha-ara-dalàna ny Uber, raha izany, mazava amiko ny antony handrarana azy. Saingy hanana ny fampiharany manokana ny tanàna ankehitriny? Inona koa ny manaraka? Handràra ny Airbnb ary hametraka ny fampiharany hotely azy manokana?
Raha ny marina, mino aho fa mifantoka bebe kokoa amin'ny fanatsarana ny fepetra ny asan'ireo saofera taxi sy ny kalitaon'ny tolotra taxi i Seoul fa tsy hiady amin'ny Uber.